Bra-less fashion နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ Bella Hadid – FemaleWear.net
အသက် ၂၁နှစ်အရွယ် Bella ကတော့ Bra-less fashion နဲ့မကြာခဏပွဲတွေ တက်လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး အခုလည်း Dior ပွဲကို bra-less fashion နဲ့ပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်။သူမဝတ်ဆင်ထားတာကတော့ Dior ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ black dress ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Dior ရဲ့ The Art of Colour’ exhibition ပွဲကိုတော့ Shanghai မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Make-up artist Peter Philips ကလည်း သူမနဲ့အတူ လိုက်ပါပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်။
My sweet…The genius, Mr @peterphilipsmakeup my partner in tour.!!Thank you for it all !❤ Love you❤ @diormakeup #DiorTheArtOfColor
A post shared by ? (@bellahadid) on Mar 21, 2018 at 8:11am PDT
Bella ကတော့ လက်ရှိမှာ Victoria’s Secret ရဲ့ model တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့သွားလာနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း သူမရဲ့ instagram မှာ Dior’s ရဲ့ make-up တွေ ပြင်ဆင်ပြီး promote လုပ်နေတာ တွေ့ရပါသေးတယ်။
A post shared by ? (@bellahadid) on Mar 21, 2018 at 4:01pm PDT
Tags: Bella Hadid, Celebrity